The Realme C2 na-anabata gị gam akporo 10 melite | Gam akporosis
Ezie na ụfọdụ smartphones na-na-gam akporo 11 site na nwoke OTAs, na Gbanwee C2 nke 2019 ka na-enweta A gam akporo 10 melite na udidi ya.
Ebumnuche ya na arụmọrụ dị ala na ọnụ ọgụgụ akụ na ụba, cheta, ka ebidoro ya na Eprel 2019 na gam akporo OS 9. Kemgbe ahụ, ụlọ ọrụ China kwere nkwa na gam akporo 10 OTA melite maka 2020, mana nke a eruteghị ekwentị ruo ugbu a.
Realme C2 mechara nweta gam akporo 11 OTA
Na ngwụcha Septemba afọ gara aga, onye nrụpụta China bidoro iwepụta ndị nyocha beta maka mmelite gam akporo 10 maka Realme C2. Ya mere, ọ were ihe karịrị ọnwa anọ ka ụlọ ọrụ ahụ wepụta nkwalite kwụsiri ike, nke bụ nke ekwentị na-enweta ugbu a.
Ọbụna ugbu a, realme UI melite maka realme C2 dị naanị iji họrọ ndị ọrụ, dị ka ọnụ ụzọ ahụ PiunikaWeb. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, a na-etinye ya n’ọrụ n’otu oge iji zere ihe ọghọm ọ bụla; Nke a bụ ka mbinye aka, ọ bụrụ na OTA na-eweta nsogbu, nwere ike ịkwụsị ya ngwa ngwa, na-enweghị nsogbu maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ya mere, ọ nwere ike iwe ogologo oge maka mmelite ahụ iji ruo draịva niile; na ajụjụ, ọ ga-ewe ụbọchị ole na ole ma ọ bụ izu tupu ọ gbasaa ebe niile.
Nke ahụ kwuru, mmelite ahụ na-abịa na nsụgharị ngwa ngwa C.53 na akara ngosi nche nke Jenụwarị 2021. Ọ dị ihe dị ka 2.1GB maka ndị ọrụ ọwa siri ike yana naanị 164MB maka ndị bụ akụkụ nke mmemme beta. Ọzọkwa, ebe ọ bụ na ngwaọrụ a bụ ọkwa ntinye, ndị ọrụ agaghị achọta atụmatụ niile nke Realme UI, nke bụ isi ColorOS 7 nwere obere obere tweaks ebe na ebe ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Realme C2 na-anabata mmelite gam akporo 10
Pink bụ otu n’ime ihe mgbagwoju anya izizi na egwuregwu na egwu ị nwere ike igwu